ရီညိုရစ်ဝန်း သန္တာကျွန်း အလှသရဖူ မြို့ကျောက်ဖြူ နတ်ရွာသဖွယ် သန္တာမြေ မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏.....
ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ “၀ိဇ္ဖာစရဏသမန္န” ဂုဏ်တော်ဟာ နှိုင်းတုလွတ်ကင်းတဲ့ ၀ိဇ္ဖာအသိဥာဏ်များနဲ့ စံတင်ရတဲ့ စရဏအကျင့်တရားများကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ဂုဏ်တော် ဖြစ်တယ်။ ဘုရားရှင်တို့မှာ အထူးသိမြင်တက်တဲ့ ၀ိဇ္ဖာဥာဏ် ရှစ်ပါးရှိပါတယ်။
၁။ ပုဗေနိဝါသာနုဿတိဥာဏ်။ ရှေးကဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘ၀အားလုံးကို ပြန်ပြီးအောက်မေ့ ဆင်ခြင်သိမြင်နိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်အထူး။
၂။ ဒိဗစက္ခုဥာဏ်။ အဝေးကအာရုံ အလွန်သေးငယ်တဲ့အာရုံ ဖုံးကွယ်နေတဲ့အာရုံ စသည်တို့ကို နတ်မျက်စိလို သိမြင်နိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်အထူး။
၃။ အာသ၀က္ခယဥာဏ်။ ကိလေသာ အသ၀တို့ကို ကုန်ခန်းစေတက်တဲ့ အရဟတ္တမဂ်ဥာဏ်။
၄။ ဒိဗသောတဥာဏ်။ နတ်နားကဲ့သို့ ကြားသိနိုင်တဲ့ဥာဏ်။
၅။ ဣဓိဝိဓဥာဏ်။ မြေလျှိုးမိုးပျံခြင်းနှင့် တန်ခိုးအမျိုးမျိုးကို ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဥာဏ်။
၆။ စေတောပရိယဥာဏ်။ သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ စိတ်ကူးအကြံအစည်ကို သိမြင်နိုင်တဲ့ဥာဏ်။
၇။ ၀ိပဿနာဥာဏ်။ ရုပ် နာမ်တို့ရဲ့ သဘာသအမှန်ကို မြင်သိတဲ့ဥာဏ်။
၈။ မနောမယိဓိဥာဏ်။ မိမိစိတ်အလိုအတိုင်း ပြီးစီးဖြစ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဥာဏ်။ စသည်ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာမှာ အထူးသိမြင်တဲ့ ဥာဏ်ရှစ်ပါးရှိပါသည်။
ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ ၀ိဇ္ဖာဥာဏ်များသည် ၀ိဇ္ဖာဓိုရ်တို့ရဲ့ ဥာဏ်တွေထက်ရော၊ နတ်သိကြား၊ ဗြဟ္မာတို့ရဲ့ ဥာဏ်တွေထက်ရော သာလွန်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာတွေထဲမှ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မှ မယှဉ်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖန် ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ စရဏအကျင့် (၁၅) ပါးကလည်း ထိပ်တန်းအကျင့်တရားများဖြစ်သည်။
၁။ သီလသံဝရ။ ကိုယ်ကျင့်သီလ လုံခြုံခြင်း။
၂။ ဣန္ဒြိယသံဝရ။ မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်ဆိုတဲ့ ဣနြေ္ဒခြောက်ပါးကို လုံခြုံစွာ စောင့်ထိန်းခြင်း။
၃။ ဘောဇနေမတ္တညုတာ။ စားသောဖွယ် အာဟာရဘောဇဉ်တို့၌ ချင့်ချိန်တိုင်းတာမှုရှိခြင်း။
၄။ ဇာဂရိယနုယောဂ။ နိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်း။
၅။ သဒါ။ ရတနာသုံးပါးနဲ့ ကံ ကံ၏အကျိုးတရားတို့ကို ယုံကြည်ခြင်း။
၆။ သတိ။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ မမေ့မလျော့ဘဲ အမြဲသတိရနေခြင်း။
၇။ ဗာဟုသစ္စ။ ကိုသိုလ်၊ အကုသိုလ်တရားတို့၌ အကြားအမြင်များခြင်း။
၈။ ၀ီရိယ။ ကိုသိုလ်အလုပ်များ၌ ကြိုးစားအားထုပ်မှုရှိခြင်း။
၉။ ပညာ။ တက်ကောင်း၊ သိကောင်းတဲ့အတက်ပညာ၊ အသိပညာတို့မှာ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်း။
၁၀။ ဟိရီ။ မကောင်းမှုဒုစရိုက်များကို ကျူးလွန်ရန် ရှက်ခြင်း။
၁၁။ သြတ္တပ။ မကောင်းမှုဒုစရိုက်များကို ကျူးလွန်ရန် ကြောက်လန့်ခြင်း။
၁၂- ၁၅။ ရူပါဝစရ ပထမဈာန်၊ ဒုတိယဈာန်၊ တတိယဈာန်၊ စတုတ္ထဈာန်။ တို့ဖြစ်ကြသည်၊ ဤသည်ကိုပင် စရဏ ၁၅ ပါးဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ ၀ိဇ္ဖာဥာဏ်များသည် သဗညုတဥာဏ် ပြည့်စုံလာအောင် ပြုပြင်ပေးကြသည်။ စရဏတရားများမှ မဟာကရုဏာတော်ကို ပြည့်စုံအောင် ပံ့ပိုးပေးကြသည်။ ဘုရားမြတ်စွာသည် ဤဥာဏ်တော်များဖြင့် သတ္တ၀ါများရဲ့ အကျိုးမဲ့မှု၊ အကျိုးရှိမှုများကို သိတော်မူပြီး မဟာကရုဏာတော်ဖြင့် သတ္တ၀ါတို့ကို အကျိုးမဲ့မှုမှ ကယ်တင်ကာ အကျိုးရှိရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးတော်မူခဲ့သည်။
Posted by အရှင်ဣန္ဒောဘာသ(ကျောက်ဖြူ) at 7:19 PM 1 comment:
မပြစ်မှားသင့်သော ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါး
မှတ်မိနေသေးသည် ရဟန်းဖြစ်ခါစ ပြည်တွင်းတွင် ပရိယတ္တိစာပေများကိုသင်ယူနေစဉ် တစ်ခုသော ညမှာ စာရေးသူနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့ ကျောင်းတိုက်အနီးတရားပွဲမှာ တရားဟောဓမ္မကထိကဆရာတော် (ပျံလွန်တော်မူသွားသော ကျေးဇူးတော်ရှင် ဖြူးဆရာတော်) က ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါးကို အကျယ်တစ်ဝင့် ဟောကြားသွားခဲ့သည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကို ခံယူပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားသော ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်သော သူများသည် လောက၌ မဖြစ်မှားသင့်သော ပုဂ္ဂိုလ် (၁၀) ယောက်ရှိသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည် အလွန်ကျေးဇူးများသောကြောင့် ပြစ်မှားခြင်းငှါ မသင့်တော်ပါ။
ထိုပုဂိုလ်တို့မှာ (၁) ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်။ (၂) ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သော ပစ္စေကဗုဒ္ဓါအရှင်မြတ်။ (၃) ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သော အဂ္ဂသာဝက၊ မဟာသာဝကရဟန္တာအရှင်မြတ်။ (၄) ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သော ရဟန္တာအရှင်မြတ်။ (၅) ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သော မိခင်။ (၆) ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သော ဖခင်။ (၇) ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သော လိမ္မာစေရန် ကျိုးကြောင်းဆုံးမပေးသော ဆရာ။ (၈) သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်တို့ကို ဆည်းပူးဖြည့်ကျင့်လျက်ရှိကြကုန်သော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်။ (၉) ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သော တရားဓမ္မတို့ကို ဟောပြောပေးတက်သော ဆရာ။ (၁၀) ထမင်းတစ်လုပ်၊ ရေတစ်မှုတ်စသည်ဖြင့် ပေးကမ်းချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ဘူးသော ကျေးဇူးရှင် များဖြစ်ကြသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ် (၁၀)ယောက်ကို ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါးဟုခေါ်သည်။
ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးကို ပြစ်မားမိသော သူတို့သည် ပစ္စုပ္ပန်၊ တမလွန် ဆိုးကျိုးများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကို သိရှိနားလည်၍ ပူဇော်သောသူတို့သည် ပစ္စုပ္ပန်၊ တမလွန် ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးကြီးမားသော ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးအား ပြစ်မားမိသောသူတို့သည် “သွေးအန်ဖြစ်လွယ်၊ ရောင်းဝယ်ရှုံးခြင်း၊ ချို့ယွင်းအင်္ဂါ၊ နူနာကုဋ္ဌ၊ ရူးကြဖောက်ပြန်၊ မင်းဒဏ်သင့်ခဏ်း၊ ကြမ်းတမ်းစွပ်စွဲ၊ သေကွဲသားချင်း၊ ပျက်ခြင်းစည်းစိမ်၊ နေအိမ်မီးလောင်၊ ဒုက္ခကောင်သည်၊ လူ့ဘောင်ဒိဋ္ဌ၊ တွေ့ကြုံရ၍၊ သောကငရဲ၊ ကမ္ဘာစွဲ၏။” ထို့အပြင် မဂ်၊ ဖိုလ်၊ နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း တားဆီးနိုင်၏။
ထို့အပြင် ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးကို ပူဇော်သောသူတို့သည်၊ (၁) အရပ်တစ်ပါးသွားလည်း အစားအစာမရှားပါးခြင်း။ (၂) ရောက်ရာအရပ်၌ လေးစားပူဇော်ခံရခြင်း။ (၃) ရန်သူမျိုးငါးပါးမနှိပ်စက်ခြင်း။ (၄) ချစ်ခင်သူပေါများခြင်း။ (၅) မည်သည့်ပရိသတ်အလယ်၌မဆို တင့်တယ်စွာနေနိုင်ခြင်း။ (၆) ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကျော်စောခြင်း။ (၇) အခြံအရံမပြတ်ရှိခြင်း။ (၈) မွေးမြူသော တိရိစ္ဆာန် စိုက်ပျိုးသောသီးနှံ ဖြစ်ထွန်းခြင်း။ (၉) ဘေးဒုက္ခရောက်ခဲ့သော် အကူအညီ အမှီအတွယ်ရရှိခြင်း။ (၁၀) သား သမီးနှင့် စီးပွါးဥစ္စာ ကောင်းမွန်စွာ ဖြစ်ထွန်းခြင်းစသည့် အကျိုးတရားတို့ကို ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူရဲ့ ချစ်စွာသော စာဖတ်ပရိသတ်များလည်း ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးရဲ့ ကျေးဇူးတရားများကိုနားလည်သိရှိကြ၍ ကျေးဇူးဆပ်ကာ အထက်ဖေါ်ပြပါ ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကို ရရှိနိုင်ကြပါစေ…….
Posted by အရှင်ဣန္ဒောဘာသ(ကျောက်ဖြူ) at 4:56 PM2comments:
မြန်မာအပါအ၀င် ငါးနိုင်ငံအား အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာထုပ်ပေး
Posted by အရှင်ဣန္ဒောဘာသ(ကျောက်ဖြူ) at 10:40 PM 1 comment:
ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်စပ်၍ လူအများ အထင်အမြင်မှားတက်ကြပုံမှာ မှန်တာကိုလုပ်၊ ဟုတ်တာကိုပြောလျှင် ကိစ္စနှောင့်နှေးရုံသာမက မပြီးစီးဘဲရှိတက်သည်။ ဈေးသည်ဖြစ်လျှင်လည်း ကုန်ရှုံးပြီး၊ အကျိုးကြီးနည်း၍ မွဲရုံသာရှိမည်ဟု ထင်မှတ်တက်ကြလေသည်။ ထိုသို့ ထင်မှတ်သည့် အတိုင်းပင် “မုသားမပါ လင်္ကာမချော” ဟူသော စကားကိုလက်ကိုင်ထားပြီး တရား၊ မတရားကို မတွေးတော၊ လောလောဆယ် အကျိုးကိုသာ မျှော်ကိုးကာ စီးပွါးရေးသောင်းကျန်း၊ အမှားလမ်းကို လိုက်ကြသဖြင့် ဒုက္ခများရုံသာမ၊ အကျင့်စာရိတ္တလည်းပျက်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဘက်၌လည်း လူအယုံအကြည်ကင်း၍ စီးပွါးရေး မရဏတွင်းသို့ ဆင်းရတက်လေသည်။ မရိုးသား၊ မဖြောင့်မတ်၊ လျှို့ဝှက်အပ်သော အမှုဖြင့် စီးပွါးရှာလျှင် ကြီးပွါးမြန်သည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ထိုမတရားလျှို့ဝှက်မှု ပေါ်မည်စိုးသဖြင့် အမျိုးမျိုးပိတ်ဆို့ရန် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊ အားကုန်၊ လူပင်ပန်းခံရသည့်အတွက် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာမှု မရှိနိုင်ပါ၊ ဤမျှသာမက မတရားလျှို့ဝှက်မှု ပေါ်ပေါက်ပြန်လျင်လည်း အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း၍ ဆင်းရဲပင်ပန်းရ၏။
အကယ်၍ တခဏတာ အကျိုးမျှလောက်ကိုသာ မမျှော်ကိုးပဲ အရှည်ကိုကြည့်ကာ မိမိပြုလုပ်သော အမှူမှာ သူတစ်ပါးကိုမထိပါး တရားတော်အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း ကောင်းစွာသိ၍ ပြုလုပ်ပါက စိတ်မချမ်းသာဖွယ် တစ်စုံတရာမျှမရှိ ချမ်းသာအတိသာဖြစ်ပြီးလျှင် ယင်းဖြောင့်မတ်သော အလုပ်အတွက် အကျိုးပိုထွက်ပါကလည်း ဆထက်တမ်းပိုး တိုး၍ပင်ချမ်းသာသုခကို ခံစားရမည်မှာ မလွဲပင်ဖြစ်ချေမည်။ (၂) စိတ်ထားစင်ကြည်၍ တည်ကြည်သော သမာဓိရှိခြင်းဆိုရာ၌ သူတစ်ပါး၏ပစ္စည်းကို လိုချင်နှစ်သက်ခြင်း၊ သူတစ်ပါး၏ ပျက်စီးကြောင်းကို ကြံစည်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်၍ မိမိစိတ်ကိုကောင်းသောအရာ အကျိုးရှိသောအရာ များ၌သာ တည့်တည့်စွဲမြဲစေရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ စိတ်ထားမစင်ကြည်လျှင် ပြောသောစကားလည်း စင်ကြည်နိုင်မည်မဟုတ်သလို လုပ်သောအလုပ်မှာလည်း အပြစ်ကင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လူတစ်ယောက်၏ အပြောနှင့် အလုပ်သည် ထိုသူ၏စိတ်ထားပေါ်မှာ မူတည်သဖြင့် ထိုသူ၏ စိတ်ထားစင်ကြည် ကောင်းမွန်မှသာလျှင် ထိုသူ၏ အပြောနှင့် အလုပ်များလည်း စင်ကြည်ကောင်းမွန်မည်သာဖြစ်၏။ သမာဓိရှိခြင်း ဆိုသည်မှာ အာရုံတစ်ခု၊ (သို့) ကိစ္စတစ်ခုပေါ်၌ စိတ်ကိုတာရှည်တည်တံ့အောင် ထားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ စိတ်မတည်တံ့သောသူ၏ အလုပ်သည် ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း တစ်သမက်တည်း တိုးတက်ပြီးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ၊ ပြီးစီးသည်ဟုဆိုရပြန်ကလည်း အခြေမခိုင်သော အိမ်ကဲ့သို့ တာရှည်မခိုင် ပျက်စီးမည်သာဖြစ်၏။
၃။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ကောင်းသောလောကီပညာ တစ်ခုနှင့် မိမိသံသရာလမ်းစဉ် အကြောင်းကို ကောင်းစွာသိနိုင်သော လောကုတ္တရာပညာရှိခြင်းဆိုရာ၌ (က) အသက်မွေးကျောင်း ပညာမရှိလျှင် ဥစ္စာပစ္စည်းမရှိနိုင်၊ ဥစ္စာပစ္စည်းမရှိလျှင် နောင်ဘ၀လမ်းစဉ်တွင် ချမ်းသာရေးအတွက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယခုဘ၀မှာပင် လူချင်းတူတူ သူချင်းမျှမျှ မနေနိုင်၊ မစားသောက်နိုင်ပဲ ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ထိုဆင်းရဲဒုက္ခမှ ကင်းလွတ်၍ ချမ်းသာစွာ နေနိုင်ရေးအတွက် ကောင်းသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာတစ်ခုခုနှင့် ပြည့်စုံရပေမည်။ (ခ) ဤကဲ့သို့ လောကီအသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းပညာတစ်ခုခုတက်၍ စားသောက်၊ ၀တ်ဆင်၊ နေထိုင်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးစသည် ပြည့်စုံသော်လည်း လူ့ဘ၀ရကျိုးနပ်ပြီးဟုကား မဆိုနိုင်ချေ၊ ကြီးကျယ်သော သဌေး၊ သကြွယ်စည်းစိမ်တို့ထက် ကြီးကျယ်သော ပဒေသရာဇ်၊ ဧကရာဇ်စည်းစိမ်၊ လူ့ပြည်တွင်အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်သော စကြာဝတေးမင်း စည်းစိမ်ကိုပင် ရသောလည်း လူ့ဘ၀ရကျိုးနပ်ပြီးဟုကားမဆိုနိုင်ပါ။ ဤကဲ့သို့သော ကာမစည်းစိမ်မျှလောက်ကိုသာ ရည်ရွယ်တော်မူ၍ လူ့ဘ၀ရခဲသည်ဟု ဘုရားရှင်ဟောတော်မူသည်မဟုတ်ပါ။ လူဘ၀တည်းဟူသော ဘ၀ပဒေသာပင်ကြီးမှာ အောက်တန်းလောကီချမ်းသာနှင့် အထက်တန်း လောကုတ္တရာချမ်းသာများကို ယူလိုက ရနိုင်သည်ဖြစ်ရာ အထက်တန်းဖြစ်သော လောကုတ္တရာချမ်းသာကိုရမှသာ လူ့ဘ၀ရကျိုးနပ်သည်ဟု ဆိုနိုင်မည်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် သံသရာလမ်းစဉ်အကြောင်း၊ ထိုလမ်းစဉ်တွင်တွေ့ကြုံရမည့် ဆင်းရဲဒုက္ခ အမျိုးမျိုးနှင့် ချမ်းသာသုခ အမျိုးမျိုးအကြောင်း၊ ထိုဆင်းရဲဒုက္ခ အမျိုးမျိုးမှ ကင်းလွတ်၍ ချမ်းသာသုခ အမျိုးမျိုးရနိုင်ပုံအကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အထက်တန်းဖြစ်သော လောကုတ္တရာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရနိုင်ပုံအကြောင်းများကို ပြဆိုသောဝါဒဖြစ်၍ ချမ်းသာအစစ်ကို အလိုရှိသောသူသည် ထိုဗုဒ္ဓ၀ါဒဖြစ်သော လောကုတ္တရာပညာနှင့်ပြည့်စုံရမည်။ ဤပြဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း လူ့ဘ၀၏တန်ဖိုးကိုသိရှိကြပြီးလျှင် (၁) ကိုယ်ကျင့်တရား၊ (၂) စိတ်ထားစင်ကြည်၍ တည်တံ့သောသမာဓိ၊ (၃) လောကီ၊ လောကုတ္တရာပညာ ဤသုံးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံကြ၍ လူ့ဘ၀၏တန်ဖိုးကို တစ်စတစ်စတိုးမြှင့်ကြပြီးလျှင် လောကီ လောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသော ချမ်းသာတို့ကို ရရှိခံစားနိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်သာဖြစ်ပေသည်။
Posted by အရှင်ဣန္ဒောဘာသ(ကျောက်ဖြူ) at 5:35 PM 1 comment:
လူ့ဘ၀၏တန်ဖိုးကို အဘယ်ပုံ အဘယ်နည်းနှင့် အကဲဖြတ်မည်နည်း? လူ့ဘ၀၏တန်ဖိုးကို မည်သူမျှ အကဲမဖြတ်နိုင်ပါ။ မှန်ပါသည် လူ့ဘ၀၏အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနှင့် ထိုရည်ရွယ်ချက်ကြီး အောင်မြင်ရေး လမ်းစဉ်များအပြင် မည်သည့်အဆင့်အတန်းသို့ရောက်မှ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်မှာလဲ? လူ့ဘ၀ ဆိုသည်မှာ လူ့ရုပ်၊ လူ့နာမ်၊ လူ့ခန္ဓာစုပေါင်း၍ လူဟုဖြစ်နေသည်ကိုပင် လူဟုခေါ်သည်။ လူ့ဘ၀သည် ချမ်းသာအမျိုးမျိုးကို ပေးနိုင်သော ဘ၀ပဒေသာပင်ကြီးဖြစ်သဖြင့် ဤလူ့ဘ၀၏ တန်ဖိုးကို မည်သူမျှ အကဲမဖြတ်နိုင်ချေ။
ဤလူ့ဘ၀၏ တန်ဖိုးကြီးကျယ်ပုံမှာ နတ်မင်း သိကြားမင်းတို့၏ ဘ၀စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုရရန် လူ့ဘ၀မှာ အခြေစိုက်၍ တည်ထောင်ရသည်။ ဗြဟ္မာမင်းတို့၏ ဘ၀စည်းစိမ်နှင့် တန်ခိုးဣဒ္ဓိပါဒ်တို့ကို ရရန်မှာလည်း လူ့ဘ၀မှာပင် အခြေစိုက်တည်ထောင်ရသည်။ လူ့ပြည်၌ သဌေး၊ သကြွယ်၊ ပဒေသရာဇ်၊ ဧကရာဇ်၊ စကြာမင်းတို့၏ဘ၀နှင့် စည်းစိမ်ချမ်းသာတို့ကိုရရန် လူ့ဘ၀မှာပင် အခြေစိုက်၍ တည်ထောင်ရလေသည်။ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်၍ သာဝကဗောဓိ၊ ပစ္စေကဗောဓိ၊ သမ္မာသမ္ဗောဓိများကို ရရှိတော်မူကြသော လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ အရိယအမော် ပုဂ္ဂိုလ်ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့သည်လည်း မိမိတို့၏ဆိုင်ရာ ဗောဓိပန်းတိုင်များသို့ရောက်ကြရန် ဤလူ့ဘ၀မှာပင် အခြေချတည်ထောင်ခဲ့ကြရသည်။ ဤသို့လျှင် လူ့ဘ၀သည် ဘ၀ပဒေသာပင်ကြီးဖြစ်သဖြင့် ဤလူ့ဘ၀၏ တန်ဖိုးကို အဘယ်သူ အကဲဖြတ်နိုင်ပါမည်နည်း။
ဤသို့ အကဲမဖြတ်နိုင်လောက်အောင် တန်ဖိုးရှိသော ဘ၀ပဒေသာပင်ကြီးဖြစ်သည့် လူ့ဘ၀မှာ လူချမ်းသာ၊ နတ်ချမ်းသာ၊ ဗြဟ္မာချမ်းသာဟူသော အောက်တန်းလောကီချမ်းသာနှင့်၊ မဂ်၊ ဖိုလ်၊ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော အထက်တန်း လောကုတ္တရာချမ်းသာများကို အစွမ်းရှိသမျှယူနိုင်ရန် အခွင့်အရေးသည် လွယ်ကူသော အခွင့်အရေးမျိုးမဟုတ်ချေ။ လောက၌ အလွန်တရာရနိုင်ခဲသည့် အခွင့်အရေးမျိုး ဖြစ်သောကြောင့် “မနုဿတ္တ ဒုလ္လဘ” လူ့ဘ၀ကိုရခဲသည်ဟု ဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ရခဲလှစွာသော အခွင့်ကောင်းကြီးနှင့် ကြုံတွေ့ပါလျှက် မိမိဘ၀၏တန်ဖိုးကို မသိသဖြင့် ဘ၀ပဒေသာပင်ကြီးမှ ယူလိုလျင် ရနိုင်သော အထက်တန်း လောကုတ္တရာချမ်းသာ တစ်စုံတစ်ရာကိုမျှမရဘဲ (သို့) ၄င်းချမ်းသာမျိုးစေ့ တစ်ခုခုကို ရအောင်အားမထုပ်ဘဲ အချိန်ကုန်လွန်သွားခဲ့ပါလျှင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင် ထိုက်တန်လှသော ပတ္တမြားတုံးကြီးကို မြင်ပါလျှက် ၄င်း၏တန်ဖိုးကို မသိသဖြင့် မြက်ကိုသာစား၍ ပတ္တမြားတုံးကြီးကို ကျော်သွားသော သားသမင်ပမာ ဘ၀ပဒေသာမင်ကြီး၏ အရသာကိုမခံစားရလျှင် ထိုဘ၀ပဒေသာပင်ကြီး တည်းဟူသော လူ့ဘ၀ကို ရသည်ဟုပင် မည်မည်ရရ မပြောပလောက်ချေ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ သဘောအရ လူ့ဘ၀၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ယုတ်နိမ့်သော အဆင့်အတန်းမှ၊ မြင့်မြတ်သော အဆင့်အတန်းသို့တက်ရန်။ မကောင်းမှု အကုသိုလ် သဘောမှ၊ ကောင်းမှုကုသိုလ် သဘောသို့ပြောင်းရန်။ သေးငယ်သောဘ၀မှ၊ ကြီးကျယ်သောဘ၀သို့တက်ရန်။ အ၀ိဇ္ဇာ အမိုက်မှောင်မှ၊ ၀ိဇ္ဇာအလင်းသို့ဝင်ရန်။ အောက်တန်း လောကီချမ်းသာမှ၊ အထက်တန်း လောကုတ္တရာ ချမ်းသာသို့ တက်ရန်ဖြစ်ပေသည်။ အထက်ပါရည်ရွယ်ချက် ထမြောက်၍ ကြီးပွါးချမ်းသာခြင်းသို့ ရောက်လိုသောသူသည် (၁) ကိုယ်ကျင့်တရားရှိခြင်း။ (၂) စိတ်ထားစင်ကြည်၍ တည်တံ့သော သမာဓိရှိခြင်း။ (၃) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ကောင်းသောလောကီပညာတစ်ခုခုနှင့် မိမိ၏ ဘ၀လမ်းစဉ်အကြောင်းကို ကောင်းစွာသိနိုင်သော လောကုတ္တရာပညာရှခြင်း ဟူသော အချက်သုံးမျိုးနှင့် ပြည့်စုံရမည်။
ထို သုံးမျိုးအနက် (၁) ကိုယ်ကျင့်တရားရှိခြင်း ဆိုရာ၌ (က) သူတစ်ပါး အသက်ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ နစ်နာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြည်၍၊ သူတစ်ပါးတို့အား သနားကြာင်နာခြင်း။ (ခ) သူတစ်ပါးတို့၏ ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ ရှောင်ကြည်၍၊ သူတစ်ပါးတို့အား တက်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း။ (ဂ) ကာမဂုဏ်မှု မှားသောအကျင့်မှ ရှောင်ကြည်၍ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း။ (ဃ) မမှန်သောစကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြည်၍၊ မှန်ကန်သော အကျိုးများသော နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော စကားကိုပြောဆိုခြင်း။ (င) မေ့လျော့ယစ်မူး စိတ်ရူးနောက်ကျိ ဖြစ်စေတက်သော သေရည်အရက်မှ ရှောင်ကြည်၍ မမေ့မလျော့သော သတိရှိခြင်း။ ဤငါးမျိုးသော ကိုယ်ကျင့်တရား အမြဲရှိရမည်။ ဤကိုယ်ကျင့်တရားငါးပါးမြဲလျှင် မြဲသလောက် ချမ်းသာမည်။ မမြဲလျှင် မမြဲသလောက် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မည်။
မှတ်ချက်။ လူ့ဘ၀၏ တန်ဖိုး အပိုင်း (၂) ဆက်ပါမည်။
` မေတ္တာဖြင့်……. အရှင်ဣန္ဒောဘာသ(သန္တာမြေမှကြယ်တစ်ပွင့်)
Posted by အရှင်ဣန္ဒောဘာသ(ကျောက်ဖြူ) at 12:46 AM 1 comment:
ယနေ့မျက်မှောက် ကမ္ဘာ၌ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ လူမျိုးတို့အတွက် မိမိတို့အသက်နဲ့ထပ်တူ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားအပ်သော ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များသည် နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်း လူမျိုးတိုင်းတို့တွင် ရှိတက်ကြပါသည်။
မူဆလင်လူမျိုးတို့အတွက် မက္ကာ၊ ခရစ်ယန်လူမျိုးတို့အတွက် ဂျေရုဆလင်၊ ဆစ်(ခ်)လူမျိုးတို့အတွက် ရွှေကျောင်းတော်၊ ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့အတွက် ဗာရာဏသီ (သို့) အယုဒ္ဓယာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတို့အတွက် ဗုဒ္ဓဂယာ၊ မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက် ရွှေတိဂုံစေတီတော်သည် ယင်းတို့၏ အသက်နှင့်ထပ်တူ အရေးပါသည့်နည်းတူ မြောက်ဦးရှေးဟောင်း ဘုရား ပုထိုးတော်များသည် ရခိုင်လူမျိုးတို့အတွက် များစွာအရေးပါလှသည်။ မြောက်ဦးရှေးဟောင်း ပုထိုးတော်များနှင့် ရခိုင်လူမျိုး၊ ရခိုင်လူမျိုးနှင့် မြောက်ဦးရှေးဟောင်း ပုထိုးတော်များသည် ဘယ်လိုမှ ခွဲခြားမရပဲတည်ရှိနေသည်။
ဤရှေးဟောင်း ပုထိုးတော်များကို ခေတ်အဆက်ဆက်က ရခိုင်လူမျိုးများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာခဲ့ကြသည်။ “သဇင်ပန်းခိုင် တစ်မြိုင်မြိုင် ရခိုင်ဘုရားပေါင်း” စသည်ဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးများသည် ထို ရှေးဟောင်း ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုများကြောင့် ကမ္ဘာအလယ်မှာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်ခဲ့သည်၊ လူမျိုးတင့်ခဲ့သည်။ လေးစားခံခဲ့ရသည်။ ချီးမွန်းခံခဲ့ရသည်။ အထင်ကြီးခံခဲ့ရသည်။ ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ရခိုင်ပြည်ကိုကြွရောက်ချီးမြှောက်ပေးခဲ့သည်ကို သမိုင်းမှာအထင်အရှားတွေ့နိုင်သည်။
ရခိုင်ပြည်သူ ပြည်သားတို့မှာလည်း ဘုရားရှင်ကြွရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကာ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြသည်။ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု ရိုးရာအမွေများကို အသက်နဲ့ထပ်တူ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထား စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာခဲ့သော ရှေးဟောင်း ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေများကို ယနေ့အချိန်မှာ ရထားလမ်းကို အကြောင်းပြပြီး ဖျက်စီးခံနေကြပြီဖြစ်သည်။ ဖျက်စီးသော သူများမှာ “ဘာသာတရားဟူသမျှသည် တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုးသော အကြောင်းများကြောင့် ကြည်ညိုလေးစားထိုက်သည်ချည်းဖြစ်၏ သို့ရာတွင် ဘာသာဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မိမိ၏ ဘာသာတရားကို အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်အောင်ဆောင်ရွက်စဉ် အခြားဘာသာဝင်များ၏ ဘာသာတရားများကိုလည်း မြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသင့်၏” ဟူသော သိရီဓမ္မာအသောကမင်းကြီးရဲ့ စကားကိုသတိပြုသင့်ပေသည်။ လူမျိုးတစ်မျိုး၏ ရှေးဟောင်း ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေများကို မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့်မျှ ဖျက်စီးရန်မသင့်ပါ။
“လှည်းဝင်းရိုးသံ တစ်ညံညံ ပုဂံဘုရားပေါင်း” စသည်ဖြင့် ပုဂံရဲ့ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေများကို အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထား ဂုဏ်ယူခဲ့ကြသည်၊ ထို ပုဂံ ဘုရား ပုထိုး ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုများကို ဖျက်စီးလျှင်၊ မန္တလေးနန်းတော်ကြီးကို ဖျက်ဆီးပစ်လျှင် မည်ကဲ့သို့ ခံစားရမည်နည်း။ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည်မှာ လူမျိုးတိုင်း လူမျိုးတိုင်းတို့၏ ဘ၀သမိုင်းပေးတာဝန်ပင် ဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလော၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်သွားလျှင် လူမျိုးလည်း ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်သွားမည်သာဖြစ်သည်။ မှန်ပါသည် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု မရှိပဲ လူမျိုးမရှိနိုင်ပါ။ သမိုင်းဟူသည်မှာ လူသားတို့က ပြုလုပ်ခဲ့သော အရာများကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။
Posted by အရှင်ဣန္ဒောဘာသ(ကျောက်ဖြူ) at 10:01 PM No comments:
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း(ဂီရိ)လေဘေးသင့်ဒေသများသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ့  ဦးစန္ဒြမဏိကျောင်းသားများသာရေးနာရေးအသင်း (UCSWA) မှ အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း(ဂီရိ) လေဘေသင့်နေရာများသို့ လှူဒါန်းငွေ
Posted by အရှင်ဣန္ဒောဘာသ(ကျောက်ဖြူ) at 3:01 PM2comments:
အေးချမ်း သာယာပြီး နေစရာကောင်းတဲ့မြို့လေးပါ
ကောင်းမှုပြုသောသူသည် ဤဘ၀၌လည်း ၀မ်းမြောက်ရ၏။ နောင်ဘ၀၌လည်း ၀မ်းမြောက်ရ၏။ ပစ္စုပ္ပန် တမလွန် နှစ်တန်သော ဘ၀တို့၌ ၀မ်းမြောက်ရ၏။ ထိုသူသည် မိမိပြုပြီးသော ကောင်းမှုကံကိုမြင်၍ အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရလေ၏။ (ဓမ္မပဒ)
ငါတို့ဖြစ်ရ ဤလောက၀ယ် ဘ၀သမိုင်း မရိုင်းစေရန် စိတ်မာန်မချ မာနမပါ တို့စွမ်းရာဖြင့် တို့သာသနာ တို့ပြည်ရွာကို သာယာစေမှု လုံးလပြုအံ့။
မှားယွင်းမှုဟူသည် မောဟမကင်းသူ လူတိုင်းနှင့် ဆက်ဆံ၏။ သူတစ်ပါးမှားလျှင် အမှန်ရောက်အောင် ငါပြင်မည်၊ ငါမှားလျှင် သူတစ်ပါးအပြင်ကို ငါခံမည်။ ငါ့ကိုပြုပြင်သူကို ငါ့ဆရာဟု အသိအမှတ်ပြုမည်၊ သူတစ်ပါးအကျိုးကို ငါလိုလားမှ ငါ့အကျိုးကို သူတစ်ပါး လိုလားမည်၊ ငါ့တာဝန်ကို ငါကိုယ်တိုင် သိ၍ဆောင်ရွက်မည်၊ ငါ့အလိုသို့သာ တစ်ဖက်သတ်လိုက်သူမှာ ငါ့မိတ်ဆွေမဟုတ်၊ သုခ၏ မျိုးစေ့ဖြစ်သော ဒုက္ခကို ရဲဝံ့စွာ ငါခံယူမည်။ ဒုက္ခ၏ မျိုးစေ့ဖြစ်သော သုခကို ရဲဝံ့စွာ ငါရှောင်ရှားမည်။ ငါ့အလုပ်နှင့် တူသောအကျိုးကို မချွှတ်ငါရမည်။
ကျေးဇူးရှင်တွေ အများကြီးထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို အားမနာတမ်း ဖွင့်ပြောပြီး ဝေဖန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အကြီးမားဆုံး ကျေးဇူးရှင်လို့မှတ်ပါ။
ချစ်ခင်ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံခြင်းကား ကွေကွင်းဖို့သာ ဓမ္မတာတည် ဘယ်မှာအမြဲ ရှိနိုင်ပဲမို့ ရုပ်ခဲ နာမ်ဆို ခန္ဒာကိုလည်း ပျိုရာမှအို အိုရာမှနာ နာရမှသေ အိုလေ နာလေ သေသာ သေ၍ အခြေတကျ ဘယ်ဘ၀မှ မရကြဘူး
လူ့ပြည်လောက လူ့ဘ၀ကား အိုရ နာရ သေရဦးမည် မှန်ပေသည်တည် သို့တပြီးကား သင်သေသွားသော် သင်ဖွားသောမြေ သင်တို့မြေသည် အခြေတိုးမြင့် ကျန်ကောင်းသင့်၏ သင်၏ မျိုးသား စာစကားလည်း ကြီးပွါးတက်မြင့် ကျန်ကောင်းသင့်၏ သင်ဦးချရာ အမျှဝေရာ စေတီသာနှင့် သစ္စာအရောင် ဥာဏ်တန်ဆောင်လည်း ပြောင်လျက် ၀င်းလျက် ကျန်စေသတည်း. (ဆရာဇော်ဂျီ)
စာရေးသူရဲ့ ဒီဘလော့လေးကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၂ ခုနှစ်၊ ၀ါခေါင်လဆန်း ၇ ရက်၊ (17-8-2010)အင်္ဂါနေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ စာရေးသူသည် ပညာရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ စာရေးဝါသနာ ပါသူသာဖြစ်ပါသည်။ အမှားဟူသည် မောဟမကင်းသူတိုင်း၌ ရှိကြသဖြင့် ဤဘလော့တွင် တစ်စုံတစ်ရာသော အမှားကို တွေမြင်ခဲ့သောင် မိမိရေးသားသည့်ဘလော့အလား အမှန်သို့ရောက်အောင် ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါစေဟု ဟန်ဆောင်မှုကင်းစွာဖြင့် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ဆင်းရဲခြင်းဟူသမျှ ကင်းပျောက်၍ ချမ်းသာဟူသမျှ ရောက်ရှိခံစားနိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုဆုတောင်းရင်း ချစ်စွာသော စာဖတ်ပရိသတ်များရဲ့ မေတ္တာကိုခံယူလျှက်..... စာရေးသူ အရှင်ဣန္ဒောဘာသ(ကုသိနာရုံ၊ အိန္ဒိယ)
ကောင်းမှုပြုသောသူသည် ဤဘ၀၌လည်း နှစ်သက်ရ၏၊ နောင်ဘ၀၌လည်း နှစ်သက်ရ၏။ ပစ္စုပ္ပန် တမလွန် နှစ်တန်သော ဘ၀တို့၌ နှစ်သက်ရ၏။ ငါသည်ကောင်းမြတ်သော အမှုကိုပြုရပေမည်ဟု နှစ်သက်ရ၏။ ထိုသူသည် ကောင်းသောဘ၀သို့ ရောက်သည့်အခါ သာ၍ပင်နှစ်သက်ရ၏။ (ဓမ္မပဒ)
အချိန်နှင့် ဒီရေသည် လူကိုမစောင့်ပါ (အိန္ဒိယစံတော်ချိန်)
အနုပညာဝါသနာရှင် ညီကို မောင်နှမများအတွက်
သန္တာမြေကြယ်တစ်ပွင့်မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ.....